युवा र ऊर्जाशील व्यक्तिलाई नेतृत्वमा अघि सार्नुपर्छ
फरकधारको यो शृंखलामा हामीले कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुसँग महाधिवेशनपछिको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ? र, युवा नेतृत्वको सम्भावना के छ ? भनी सोध्ने छौँ । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस लमजुङ​का सभापति भेषबहादुर पौडेल​​लाई हामीले यो शृंखलामा प्रस्तुत गरेका छौँ । )
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको मुखमा हामी छौँ । मुख्यतः हाम्रो अधिवेशन समयमै हुुनुपर्छ । संविधानबाट मात्रै अहिले थपिएको म्याद हामीसँग भएको बाँकी हो ।
कांग्रेसको विधानअनुसारको समय पनि नाघ्न हुँदैनथ्यो, तर, नाघ्यो । कांग्रेसको विधान पनि मान्नुपथ्र्यो । अहिले कम्तीमा पनि युवा र ऊर्जाशील व्यक्तिलाई पार्टी नेतृत्वमा अघि सार्नुपर्छ । सही एटिच्युड भएका अग्रपंक्तिका नेतालाई नेतृत्वमा अघि सार्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा मुख्यतः पद र स्वार्थका लागि नलाग्ने नेता नै नेतृत्व कांग्रेसले चाहेको छ ।
महाधिवेशन भइरहँदा सधैँजसो युवा नेतृत्वको बहस चल्छ । युवाको परिपक्वताको कुरा गरिन्छ भने केस र दारी फुलेका मात्र हेरिनुहुन्न । जोसुकैको पनि नेतृत्व र विचारमा परिपक्वता देखिनुपर्यो । युवाका नाममा उच्छृंखल र उद्दण्ड युवालाई पनि ल्याउनुभएन ।
युवा भनेको विचारमा परिपक्व भएको हुनुपर्छ । गर्न सक्ने र गर्छु भन्ने युवा हुँदा उनले गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ, मलाई । दाह्री फुलेकै भरमा परिपक्व भएको भन्ने हुँदैन् ।
विचारले परिपक्व हुनुपर्छ । यसको बहस अधिवेशनमा हुनुपर्छ । चुनाव भन्ने कुरा विभिन्न तत्वले प्रभाव पार्छ । त्यसले प्रभाव महाधिवेशनमा पार्नुहुँदैन ।
सशक्त युवाहरु राजनीतिबाट वितृष्णा भएर पलायन भएको अवस्था छ । त्यस्ता क्षमता भएका युवाले राजनीतिलाई फेर्नसक्ने खालको नेतृत्व अबको कांग्रेसले खोज्नुपर्छ । कांग्रेसभित्र विचारको भिजन बोकेका युवाको नेतृत्व आउनुपर्छ ।
यो समस्या नेपालका अधिकांश पार्टीमा छ । हाम्रोभन्दा अरुको पार्टीमा अझ धेरै छ । हाम्रोमा पनि अलिक कम छ तर यो समस्या छ । राजनीति गर्दै जाँदा आफन्त नै बढी एक्टिभ हुने हुँदोरहेछ । राजनीतिमा आउनका लागि त्याग आवश्यक छ ।
आफू पोलिटिक्समा लागेको छ भन्दैमा श्रीमती वा छोराछोरीले पनि पाउनैपर्छ भन्ने होइन । तिनको त्याग र क्षमताको मूल्यांकन हुनुपर्छ । नयाँ पुस्तामा यो विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ ।
महाधिवेशन गर्नका लागि क्रियाशील सदस्यताको विवाद ‘क्रियटिभ’ समस्या हो । यसअघि १३औँ महाधिवेशनमा पनि विवाद देखिएका जिल्लालाई छाडेर अधिवेशन गरिएको थियो । अहिले पनि अधिकांश क्रियाशील सदस्यलाई लिएर अधिवेशन गर्न सकिन्छ ।
यो समस्या समाधान गरेर महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । क्रियाशीलको विवाद ठूलो बनाएर राख्नुपर्ने विवाद होइन । पार्टीभित्रै विभिन्न नेताको स्वार्थका कारण यी सबै समस्या आएका हुन् । चाहेको खण्डमा जतिबेलै पनि गर्न सकिन्छ । जतिबेला नेताहरुको चित्त बुझ्छ, त्यतिबेला गर्नुहुन्छ ।
यतिबेला नेपाली कांग्रेस थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बेला हो । यो महाधिवेशनमा ठूलो संख्यामा उपस्थिति हुन सक्दैन । यो प्रतिनिधिमूलक हुन्छ । हरेक प्रदेशमा महाधिवेशन गरेर केन्द्रमा पनि सहज गराउन सकिन्छ । यो जमानामा आएर मान्छे नै उपस्थित भएर नै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।
सबै प्रदेशमा केन्द्रको चुनाव हुन्छ र नतिजा जम्मा गरेर सुनाउँदा हुन्छ । यसो हुँदा चलखेल घट्छ र नराम्रो प्रभाव पनि हट्छ । यतिबेला नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने बेला हो । तर, नेतृत्वमा गम्भीरता पुगेको छैन ।
प्रकाशित मिति : भदौ २, २०७८ बुधबार १७:२७:४६, अन्तिम अपडेट : भदौ ३, २०७८ बिहीबार २०:३५:९